musha / Interior design / Yakananga Makakombama, Kudzungairirana kudyidzana, Nyowani Maitiro mune Akasiyana Uye Anoshanda Mahofisi | Yuqiang Dhizaini
2021 / 06 / 19 kupatsanuraInterior design 5941 0
Desidaily Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Dhizaini haifanire kumira pakutonga mitsara uye mavara
Haifanirwe kumira panzvimbo payo pachayo
Dhizaini inofanirwa kugadzira mazano
Gadzira kutaurirana kwepamoyo pakati pevanhu nenzvimbo
"Kunaka, kugona, kunoshanda, kunzwisisika, kuzvidzora, kutendeka, kushaya nguva, zvakadzama, zvakachengetedza nharaunda uye zvishoma zvirinani."
-German dhizaina Dieter Rams
Akaronga nhungamiro gumi dze "yakanaka dhizaini".
Mumakore achangopfuura, YuQiang & Partners vakatarisa pane akasiyana mafambiro matsva ekugadzirwa kwehofisi, senge girini, akasiyana, anoshanda uye ehunyanzvi. Tiine tarisiro yekutarisisa yekumberi, isu takaunganidza ruzivo mukugadzira mapurojekiti ezviyero zvakasiyana, senge yekuzvishandisira mahofisi uye kuratidzwa kwehofisi, uye zvishoma nezvishoma tave piyona mukuvandudza dhizaini dhizaini.
Mukuita kwekugadziriswa dhizaini, isu tinotarisa pakunzwisisa mamiriro ebhizinesi emabhizinesi, kubatanidza avo vega ekuvandudza budiriro uye hunhu hwevashandi, uye kunyatso tsanangudza mamiriro enzvimbo bhizinesi rega rega. Pahwaro hwekugamuchirwa kwemutengo, isu tinobatsirawo mabhizinesi kuti aongorore zvingangodiwa zvehofisi mazuva ese kubva pamudzi, achitora kushanda senzvimbo yekutangira uye zvishoma nezvishoma achikurisa kukosha kwehunyanzvi kunzvimbo yemahofisi.
Iyo purojekiti iri muWuxiang Dunhu Nyowani yeNanning City, ine pasi pese sehofisi nzvimbo, uye iyo nzvimbo iri pachena kumativi ese neakanakisa maonero.
Sekambani inodyara mari, inogadzira uye inoshandisa kuchengetedza mvura uye zvirongwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza, isu tinoshandisa hunhu hwe "mvura" kuva mvura, mapurasitiki uye akazara nehupenyu. Isu takabatanidza kutenderera kutenderera mukati mechivako chose, nechikamu chimwe nechimwe chinoshanda chakaturikidzana pamusoro pechimwe nechimwe zvichienderana nezvinodiwa, uye module yega yega ine zvigadzirwa zvehunyanzvi maererano nezvinodiwa kuti zvifanane neayo "fluid uye akasiyana" hunhu hwehofisi.
Nyoro asi ine simba yekuona gwara
Environmental psychology inoonekwa mumativi ese ehupenyu. Zvekugadzirwa kwehofisi, vagadziri vanofanirwa kubatanidza ruzivo rwunonzwisisika, kuti zvinoonekwa zvezvakatipoteredza zvirambe zviri "zvine musoro" apo zvichichengetedza "kugona kwesainzi" kune vashandisi.
"Kusiyana nehofisi yechinyakare ine nzvimbo dzakajeka, isu chataida kudzikisira miganhu. Mugadziri akati, "Taida kuunza mhepo uye mwenje kuchikamu chimwe nechimwe, tichisimbisa kukosha kwekutenderera."
“Madziro ese, makoramu, magetsi, midziyo yakapfava, haishande sekuparadzanisa nzvimbo dzakasiyana. Ivo vanongova nzira mukati me'kutenderera kwese 'kweringi, uko vanhu vese nezvinhu zvakabatana. "
Kuti tirambe tichifema pachiuno chetenderedzwa, tinofanirwa kuyera chinhambwe pakati pechiedza nedenga.
Mushure memiedzo yakati wandei yekumisazve mwenje pamusoro, nharaunda yakakomba inotangira kubva pamusuwo yakatanga kuburitsa yakachena uye yakapfava "kureruka" kubva pasi kumusoro.
Kukombama kwemitsara uye chokwadi chezvinhu. Chimiro cheyakagamuchirwa tafura yekudonha izere nechimiro chekuyerera kwemvura, ichiita kunge chakadzikama uye ichifamba, yakapfava uye yakasununguka. Mhedzisiro yechivande chakavhenekera mwenje mezzanine inounza kuwedzera nekunyaradza kumunda wezvemweya.
Reception Kugamuchirwa kwerevheta
▲ Yekugamuchira tafura yemhando
Iyo kodhi yekuzvibata kwetambo yakatwasuka ndiyo dhizaini yekuyera kwenzvimbo inoyerera. Iyo aesthetics yenyoro makakombama akasarudzika akanyatsokodzera pasi penzvimbo inoyerera.
Area Nzvimbo Yekutambira yeMutungamiri
Zvigadziro zvepamusoro-soro maitiro shading
Kuwedzera kwakaperera kwekoridho kunopera pakuonekwa. Simba rese rinoburitswa rakakura vhoriyamu nenzira yesiluette, ichigadzira kutaura kunoonekwa kunoratidzika kunge kunopatsanurwa asi kusiri kupatsanurwa, uye kunoratidzika kunge kuchikwanisika asi kusingabvumidzwe.
Iyi misiyano mikuru uye isinganzwisisike inounza zvinyoro mafomu uye kutambanuka kwekunetseka, zvakapfuma mukuchinja kusinganzwisisike kwemakoto kubva kure kusvika padyo, zvichiita kuti matanda enzvimbo ave neupfumi kuwedzera uye mutinhimira.
Iyo yekumusoro pamusoro yekucheka inoumba chikamu chechipiri pasi pechiedza chemwenje. Iyi nzira yekuona inochengetedza kudyidzana kwekubatana kwechifananidzo chemukati, kunowedzera "anti-chipingaidzo degree" rehofisi yakagovaniswa, uye kugadzirisa matambudziko mazhinji anoshanda anoshanda sechiedza uye kufefetedza mweya, uye kutungamira kwenzira dzekufamba.
Kubatana kwehurongwa nesimba
Imba yemusangano yakavhurika, yakakura uye izere nehurongwa. Chiitiko cheguta dhizaini chinogara chakasimudzwa nemifananidzo. Iyo yakavhurika maonero uye ino yazvino nzvimbo inosangana kuti vataurirane munzvimbo imwechete, uye iyo yekutarisa nzvimbo inonakidza.
Room Kamuri Yemusangano
Guta riri kure rinosanganisirwa munzvimbo, uye mhepo ine mhepo, yakasununguka uye yakaenzana mhepo inoita kuti kushandiswa kwevanhu vakawanda uye maawa marefu kunakidze uye kushanda.
Iyo yakakura uye yakavhurika yekugamuchira vaeni nzvimbo ndiyo yemagariro hunhu inotakurwa nenzvimbo yehofisi. Kumusoro-kumagumo kwehofisi yemutungamiriri wenyika kwakavakirwa nzvimbo yekutambira, yekurara uye yemunyori tafura, yakapfuma uye inorema. Izvi zvinoenderana neyakagadziriswa denderedzwa yekumisikidzwa kwemuganhu indasitiri, iyo inoremekedza zvakavanzika zvakagadziriswa basa uye hupenyu mune zvese zvinhu.
Office Hofisi yeMutungamiri
Iyo dhizaini inosungira akasiyana mageometric mafomu kune imwechete block, ichiwedzera nekubvisa zvakafanana. Ipo ichichengetedza hukama pakati pepuraimari nesekondari, zvakare inosimbisa iyo mufananidzo uye kuratidza, ichipa iro bhendi imwe pfungwa inochinja yekusanganisa.
Ruvara rwakakodzera rwehuni runopedzisa, kuvaka uye dhizaini zvinobatanidzwa mune zvese zvinhu. Kubva munzvimbo kuenda kune vanhu, ine akasiyana epakutanga uye akareruka mamiriro epfungwa.
Dhizaini yekumisikidzwa dhizaini, yakajeka mwenje uye kuvhurika, inzvimbo yakavanzika yebhizimusi elitism, asiwo nzvimbo ine hukama nevashanyi.
Shanduko yepamoyo inosimbisa muviri nepfungwa
Maitiro ekufunga nezvehukama pakati pevanhu munharaunda, uye kugadzira kuvimba pamusoro pehunhu hwevanhu uye nemanzwiro mukuwedzera kune aesthetics?
Iyo tii imba, nzvimbo yekufungisisa uye tii, inoita basa rakakosha rekushandurwa kwemanzwiro.
Room Tea Kamuri
Iyo mwenje halo inopa yakapfava uye yakapusa kuona kwekunzwa, uye kubatana kwepanyama pakati penzvimbo yebasa nenzvimbo yevaraidzo kunogadzira shanduko mune yepfungwa pfungwa, kuitira kuti kutaurirana nekudyidzana kuve kwakatsetseka.
Zita rePurojekiti: Guangxi Guoling Boka Hofisi
Dhizaina Dhizaina: Yu Qiang Yemukati Vagadziri & Vanoshamwaridzana
Kugadziriswa kweprojekiti: 2021
Nzvimbo yeprojekti: 1970㎡
Purojekiti Nzvimbo: Nanning, Guangxi
Project Photography: ingallery
Yakavambwa mu1999, Yu Qiang Dhizaini yakamisikidzwa se "yemukati dhizaini hofisi". Inovavarira kuve dhizaini dhizaini yevanoshamisira emukati vagadziri kuti vashande pamwe chete, kutyaira kuenderera mberi kweyakagadziriswa dhizaini kuburikidza nekudyidzana kweruzivo, uye kugara uchichengeta dhizaini yekuvandudza uye kusimba.
Mushure memakore anopfuura makumi maviri, isu takavaka timu yevanhu vangangoita mazana maviri uye tikamisa chirongwa chakaringana mashandiro uye manejimendi system. Isu tinoshingairira kugovana nevatengi vedu kuyedza muchirongwa manejimendi kuve nechokwadi chekumhanya kwakanaka kweprojekiti yese uye mharidzo yakakwana yemhedzisiro yekugadzira.
Isu takaona kukura kuri kusimukira kwemaindasitiri uye tichiramba tichironga kwedu kwekutanga kuenderera mberi nekugadzira inotarisisa uye inoshambadza mienzaniso yemakambani kune vatengi vedu. Semazuva ese, isu tinosimudzira yakakosha pfungwa ye "risingagumi zvisikwa". Yedu sevhisi ecology ye "dhizaini dhizaini uye yakasarudzika bhodhi" inosangana neakasiyana magadzirirwo ebasa basa revatengi vedu.
Isu tinogara tichitenda kuti yedu yakanaka inoenderana nekutsvaga kwako.
Pakapfuura :: Elegance yeItaly Uye Yemhando yepamusoro Kuvaka Hupenyu hweRudo | HIDZA Helbena Dhizaini Zvadaro: Iyo Yakakwana Fusion Ye Dhizaini Uye Art | Maria Belousova
2021 / 08 / 15 6278